आचार संहिताको पालना खोई ? मन्त्री गगन थापाबाटै आचार संहिताको घोर उल्लंघन – ebaglung.com
आचार संहिताको पालना खोई ? मन्त्री गगन थापाबाटै आचार संहिताको घोर उल्लंघन
२०७४ बैशाख २७, बुधबार १७:१३	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
कविता घर्तीमगर, पोखरा २०७४ वैशाख २७ । स्थानीय तहको चुनाव नजिँकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आचारसंहिता विपरितका काम दोहोर्याइरहेका छन् । जस अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित कास्कीमा चुनावी सभा भएको छ । सो सभामा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा नै सामेल छन् । उनी नेपाली कांग्रेस कास्कीको चुनाव प्रचारमा केहि दिनदेखि सहभागी हुदै आएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सहभागी हुदै मन्त्री थापाले भाषणमार्फत कांग्रेसलाई भोट माग्दै आएको मात्र होईन उनले कास्कीकोटको स्वास्थ्य चौकीमा चुनावी सभा नै आयोजना गरे । यतिमात्र होईन काँग्रेसको प्रचारका लागि गाउपालिका कार्यालय
त्यसै गरि पोखरामा निर्वाचन अयोगले निर्धारण गरेको मतपत्रको चिह्नबिपरीत प्रचार भएको छ । नेपाली कांग्रेसले पोखरामा बाँडेको मतपत्रको चिह्नमा अन्य पार्टीका चुनावी चिह्न र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिह्न बिगारेर आचार संहिताबिपरीत गरेकोमा अन्य दलहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेसले पोखरामा दुई प्रकारका चुनावी चिह्न सहितको नमुना मतपत्र बाँडेको छ . ठुलो नमुना मतपत्रमा छैटौं नम्बरमा रहेको हलगोरुको चिह्नमा गिलास चिह्न राखेको छ सात नम्बरको तिर चुनावी चिह्न नै नराखेर त्यसको ठाउँमा हँसिया राखिदिएको छ । आयोगको नमुना मतपत्रमा हँसिया १९ नम्बरमा छ । त्यस्तै १९ नम्बरमा रहेको उपमेयरका स्वतन्त्रउम्मेदवार सिरोज कोइरालाको चुनाव चिह्न घडीलाई १९ नम्बरमा राखेरप्रचार गरिएको छ । मौखिक उजुरी निर्वाचन कार्यालयमा पुगेको छ ।
चुनावी चिह्न बदलेर गलतप्रचार गरेर भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै पोखरामा व्यापक विरोध भैरहेको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसले बाँडेको सानो नमुना मतपत्रमाथुप्रै चुनावी चिह्न हटाई रुखमा स्वतिक चिह्न राखेर मतदातालाई बाँडिएको छ ।
कांग्रेसले बाँडको सानो मतपत्रमा पहिलोमा कांग्रेस, दोस्रोमा हुने एमालेको चुनावी चिह्नको ठाउँमा ५ नम्बरमा रहेको संघीय समाजवादी र नयाँशक्ति गठबन्धनको मसाल, ७ नम्बरमा रहेको तिर चिह्नलाई ३ नम्बरमा, ९ नम्बरमा रहेको गिलास चिह्नलाई ४ नम्बरमा, ११ नम्बरमा रहेको घर चिह्नलाई ५ नम्बरमा राखेर प्रचार गरिएको छ ।
सानो मतपत्रमा १९ नम्बरमा रहेको उपमेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार सिरोज कोइरालाको चुनावी चिह्नलाई ९ नम्बरमा राखेर मतदातालाई कांग्रेसले बाँडेको छ ।
निर्वाचन आचार संहिता अनुसार आयोगले तोकेको निर्वाचन चिह्नलाई फेरबदल गरेर मतदातालाई बाँड्न पाईँदैन । निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को परिच्छेद–३ अन्तर्गत नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने आचरणको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नहुने बुँदामा ‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर थापा लगायतका मन्त्रीहरु चुनावी सभामा सामेल मात्र होईन, पैसा बाँडेर मतदाता प्रभावित गर्ने, सरकारी स्थलमा सभासम्मेलन गर्ने गर्दै आएको समाचारहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । उता तनहुँमा पनि काँग्रेसका नेता बनमन्त्री शंकर भण्डारीले पैसा बाँड्दै सरकारी दलबलसहित गाउँ गाउँ पुगेर काँग्रेसलाई भोट दिन भाषण ठोकेको आरोप लागेको थियो ।
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा तीन दल र स्वतन्त्र बिच चतुष्कोणीय चुनावी प्रतिस्पर्धा
आचार संहिता उल्लंघन नगर्न आयुक्तको आग्रहलाई सरोकारवालहरुले अमलमा ल्याउलान ?